Utyholwa nguMtsalane - Uvavanyo lweMalingo
Elizabeth Johnson Jr. Facts
Ubudala ngexesha lovavanyo lwamaqhinga eSalem: malunga ne-22
Imihla: 1670 - malunga ne-1732
Umama: u- Elizabeth Dane Johnson , owaziwa ngokuba yi-Elizabeth Johnson Sr (1641 - 1722)
UBawo: Misela uStefano Johnson (1640 - 1690)
Abantakwabo (ngokwemiqathango eyahlukeneyo:
UMary Johnson (1673 - 1673)
U-Elizabeth Johnson Jr. Ngaphambi kovavanyo lwe-Salem Witch
Umkhulu wakhe, uMfundisi uFrancis Dane, wayengumgxeki obalaseleyo ngecala lobugqirha bokuqala, kwaye wagxeka imicimbi yaseSalem ekuqaleni kwenkqubela yabo.
Uyise wayefile nje kwiminyaka embalwa ngaphambi kokuba amangalelwe. Unina wayenenkathazo ngesinye isizathu, mhlawumbi (ngokwemiqathango eyahlukeneyo) iindleko zobuqhetseba okanye ubuhenyu.
Elizabeth Johnson Jr. kunye novavanyo lwe Salem Witch
U-Elizabeth Johnson ukhankanywe ngoJanuwari 12, 1692, ukuthunyelwa kukaMercy Lewis naye wamtyhola uFiliphu isiNgesi kunye nomkakhe noTomas Farrer. Oku kunokuba ngumama, u-Elizabeth Johnson Sr., nangona kungekho nanyathelo ethatyathwe ngeli xesha, ngokucacileyo.
Ngo-Agasti 10, 1692, u-Elizabeth Johnson, ngokubhekiselele kwiirekhodi zenkundla, uhlolwe ngabagwebi. Wavuma ukusebenzisana neGoody Carrier kwaye wathi wayebone uGeorge Burroughs kwi-"Sacred Order" noMarta Toothaker noDaniel Eames ngesinye isikhathi. Wayevuma ukuba wayemkhathaza uSarah Phelps, uMary Wolcott, uAnner Putnam nabanye abaninzi.
Ngosuku olulandelayo uElizabethe waphinde wahlolwa, waza waqhubeka evuma. Uthe akazange abone uMarthar Carrier noMarta Toothaker kuphela kodwa abantwana bakaToothaker ababini. Wachaza indlela awayezisebenzisa ngayo iimpopethi zokuxhatshaza.
Unina wakhe u-Abigail Faulkner Sr. wabanjwa waza wahlolwa ngo-Agasti 11, osolwa ngu-Ann Putnam, uMary Warren noWilliam Barker Sr.
Ngo-Agasti 29, abantakwabo bakaElizabhete, uAbhigayil Johnson, 11, kunye noStephen Johnson, 14, baboshwe, kunye no-Elizabeth Elizabeth, u-Elizabeth Johnson Sr, u-Abigail no-Elizabeth Sr. baxanduva lokumkhathaza uMarta Sprague noAbhigali uMartin we-Andover.
Ngo-Agasti 30 no-31, odade bobabini, uAbhigayil Faulkner Sr. kunye no-Elizabeth Johnson Sr., bavavanywa bavuma. U-Elizabethe wayebandakanye unyana wakhe nodade.
Umntakwabo u-Elizabeth Johnson Jr. uStephen wahlaziywa ngoSeptemba 1. Wavuma ukuxhatshaza uMarta Sprague, uRose Foster noMary Lacy.
NgoSeptemba 8, iqela le-Andover lamasetyhini labanjelwa ngokukhawuleza emva kokuba ezimbini "zamantombazana ahluphekileyo" zithunyelwa ukuxilonga ukugula kwendoda nomfazi. Xa amantombazana abathintela abanye besetyhini edolophini, bahamba bahamba - kwaye aba bafazi baziswa ngokukhawuleza eSalm Village, bavalelwa kwaye bavavanywa.
Eli qela laliquka ukukhululwa uDane, umfazi kaNathaniel Dane, umntakwabo u-Elizabeth Johnson Jr. unina. Ukukhululwa kweDane kunye nabanye bavuma, nangona kamva bazama ukuphindaphinda.
NgoSeptemba 16, abazala baka-Elizabeth, u-Abigail Faulkner Jr, 9, noDorothy Faulkner, 11, babanjwe. Bona, nabo bavuma, bafakazela ukuba unina wayebenze ukuba babe ngabathakathi.
Ngomso olandelayo, inkundla yazama kwaye yamgweba uAbhigayil Faulkner, uRebcca Eames , uAnn Foster, uAbhigayil Hobbs, uMary Lacey, uMary Parker, uWilmott Redd, uMargaret Scott noSamuel Wardwell, kwaye bagwetywa ukubulawa. U-Abigayili isigwebo sikaFeliulkner sasilibazisekile, nangona kunjalo, njengoko wayekhulelwe, kwaye akakwazanga ukufezwa ade ahlangulwe. Iiplantshi zokugqibela zaba ngoSeptemba 1692.
Abazalwana baka-Elizabethe, uAbhigali noStefano, kunye nommelwane uSara Carrier, bakhululwa ngokuhlawula iibhondi ezingama-500, ekugcinweni kukaWalter Wright, uFrancis Johnson noTomas Carrier.
Abazala bakhe uDorothy Faulkner kunye noAnn Faulkner Jr. bakhululwa kwakhona, kunye nezibophelelo ezingama-500, ukugcinwa kukaJohn Osgood Sr noNathaniel Dane.
Ngenyanga kaDisemba, u-Elizabeth u-Eligali wagwetywa, u-Abigayili, wasinda isigwebo sakhe ngokupheleleyo xa irhuluneli yamnika ukulungeleka nokukhululwa entolongweni.
NgoJanuwari, u-Elizabeth Johnson Jr wahlala ejele, njengabanye abaninzi. Inkundla ephakamileyo yadibanisa ukucima ukuxhaswa kwamatyala. USarah Buckley, uMargaret Jacobs, uRebecca Jacobs noJob Tookey, abaye batyholwa ngoSeptemba, bafunyanwa benetyala leentlawulo. Iindleko zaxothwa ngabanye abaninzi abasolwa. Abalishumi elinesibhozo bavalelwa, aba-13 bafunyanwa benetyala kwaye 3 bavalelwa kwaye bagwetywe ukuxhoma. U-Elizabeth Johnson Jr, uSara Wardwell noMary Post. UMargaret Hawkes kunye nenceku yakhe uMary Black bephakathi kwabo bafunyaniswa netyala ngoJanuwari 3. Amashumi amane anesithoba abatshutshiswa akhululwa ngoJanuwari ngenxa yokuba amatyala awayebhekisele kubo axhomekeke kubungqina bobugcisa.
Akucaci xa umama ka-Elizabeth okanye uninakazi, i-Deliverance Dane, bekhishwa.
Elizabeth Elizabethson Jr. Emva kovavanyo
Intsapho yaseDane yayilandela ukuxolelwa ngo-Ann Faulkner Sr., ukususa izithintelo ezisemthethweni ukuba isigwebo sakhe senziwe, kwaye kucime igama lakhe. Ngomnyaka we-1711, umthethospala wePhondo laseMassachusetts Bay ubuyekeze onke amalungelo kubantu abaninzi abasetyenziswe kwiimvavanyo zonyango ngo-1692. Kuquka uGeorge Burroughs, uJohn Proctor, uGeorge Jacob, uJohn Willard, uGiles noMarta Corey , uRebecca Umhlengikazi , uSara Good , uElizabethe, uMary Easty , uSarah, uAbhigayil Hobbs, uSamuel Wardell, uMary Parker, uMarta Carrier , uAbhigali Faulkner, u-Anne I-Foster, uRebecca Eames, uMary Post, uMary Lacey, uMary Bradbury noDorcas Hoar.
U-Elizabeth Johnson kunye nentsapho yakhe banokuba bajoliswe ngenxa yokugxekwa kukayise wakhe, ngenxa yobutyebi kunye nepropati elawulwa ngu-u-Abigail Faulkner Jr, okanye ngenxa ka-Elizabeth, unina ka-Elizabeth, u-Elizabeth Johnson Sr. idumela, kwaye wayalawula impahla yakhe yomyeni ade aphinde ashade (awakwenzayo).
Elizabeth Johnson Jr. kwiCrucible
I-Andover Dane yongezelela intsapho ayinobumba ku-Arthur Miller ngokudlala malunga novavanyo lwezentengiso ze-Salem, iCrucible.
Elizabeth Johnson Jr. e Salem, ngo- 2014 uchungechunge
UAugusto Pinochet, uMlawuli wezeMpi waseChile
Indlela yokudlala Iifom ezine ze-Foursomes
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala Zase-Alaska
Ulwahlulo olukhulu phakathi kwe-NCAA ne-NBA Basketball
Akukho Namahhala okanye uMhlaba ophantsi koRhulumente
Igatya lesiNgesi elingaphantsi: Igama lesiGrike kunye neNkcazelo yegama lesiGama